iOS 8 အတွက်အကောင်းဆုံး Cydia Tweaks | Gadget သတင်း
iOS 15 အတွက် Cydia Tweaks ထိပ်ဆုံး ၁၅ ခု (အပိုင်း ၃)
Juan Colilla | | ယေဘုယျ, NOTICIAS, Software များ
စောင့်ဆိုင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "iOS 15 အတွက်အကောင်းဆုံး Cydia Tweaks ၁၅ ခု" ၏ဒုတိယအပိုင်းကိုဤနေရာတွင်သင်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့ရေးသားချက်တွင်သင့်အား tweaks ၅ ခုကိုစုစည်းထားပါလိမ့်မည်။ ။
စလုပ်ကြရအောင်၊ ရွေးလိုက်တဲ့ ၅ ခု။
3 ၈။ ChargingHelper / Plus အား
4 ၉ ။ iCleaner Pro
5 10. AppSync ကိုပေါင်းစည်းပါ
သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအဆင့်များကိုသိရန်အတွက် Notification စင်တာတွင်သင့်တွင်မည်မျှ Widget တစ်ခုရှိသနည်း။ လူအများစုကပင်€ 100 ကျော်သိရန်အတွက်လက်ကောက်များကို ၀ ယ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာကိုမသိသောသူနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် iPhone 5S,6နှင့်6Plus သည်အဆင့်များအားအဆင့်သတ်မှတ်သည်, M7 နှင့် M8 coprocessor များကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့အားလုံးအတွက် tweak တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Stepper2ဟုခေါ်သည်။ ဤပြင်ဆင်မှုသည် Apple ၏ "Health" application မှတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူထားသောအချိန်ကာလနီးပါးအခြေအနေရှိ status bar ရှိအဆင့်များကိုနေရာချသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အဆင့်အနည်းငယ်သာလုပ်သည်။ 'ငါ့ကိုပျင်းရိလို့မှတ်ချက်တွေပေးပြီးငါ့ကိုမငံပါနဲ့😛
ဗားရှင်းနှစ်ခုရှိပါတယ် (Stepper and Stepper 2) သည် iOS7နှင့် iOS 8 နှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာ iPhone 5S, Stepper25S,6or6Plus တို့ကိုလိုအပ်သည်။ tweak ကို BigBoss repo တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာဖြင့်ရနိုင်သည်။
ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များအနက်အခြားတစ်ခုရှိရမည်။ ထူးခြားသည် WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင် Apple မှသတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့် (များစွာသောကျွန်ုပ်တိုတောင်းသော) WiFi ကွန်ယက်များစွာကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်၊ (ဟာ့ဒ်ဝဲခွင့်ပြုသည့်အမြင့်ဆုံးသော့ကိုဖွင့်ရန်မဟုတ်ဘဲ WiFi signal) ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ အလွန်ဝေးကွာသောကွန်ယက်များကိုချိတ်ဆက်ပါ (ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်သည်လမ်းပေါ်တွင်နေပြီးအခြားနေ့ကဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းဘေးမှကျွန်ုပ်အိမ်၏ဝိုင်ဖိုင်ကိုချိတ်ဆက်မိသည်။ မီတာများကိုမပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်ဝေးသည်၊ ချိတ်ဆက်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ) , သို့သော် WhatsApp တွင်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်း: 3)
ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း၎င်းတွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်အများပြည်သူသုံး WiFi ကိုရှာဖွေနေသည့်အခြေအနေများတွင်ကာကွယ်ထားသောကွန်ယက်များကိုတစ်ခုတည်းထိခြင်းဖြင့်ဖုံးကွယ်ရန်အထောက်အကူပေးသည့်“ Show open only swith” တို့ဖြစ်သည်။ « Smart Passcode Lock »သည်သင်အလိုရှိသည့်ကွန်ယက်များတွင် (ဥပမာအိမ်တွင်) ဝင်ရောက်ခွင့်စကားဝှက်ကိုပိတ်ထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒေတာဘေ့စ်တွင်ဖော်ပြထားသော MAC address၊ network channel၊ encryption အမျိုးအစားနှင့်အချက်ပြအတိအကျ (ဥပမာ - -90dBm သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကွန်ယက်တစ်ခုသည်အလွန်ဝေးကွာသောကွန်ယက်) ကဲ့သို့သောကွန်ယက်များစာရင်းတွင်အပိုအချက်အလက်များကို Enable လုပ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် -60dBm ရှိသောကွန်ယက်သည်နီးကပ်သောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၃ ဘားများထက်အချက်ပြအရည်အသွေးကိုတွေ့မြင်လာသောအခါသင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လမ်းပြပေးသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် "Enable Known Network List" သည် Wi-Fi ကွန်ယက်အားလုံးအောက်တွင် "Known Networks" အပိုင်းတွင်နေရာချလိမ့်မည်။ သင့်အားသိမ်းဆည်းထားသောကွန်ယက်များ၏စကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ "pull to refresh" သည် ရိုးရိုးစာရင်းကိုအောက်သို့လျှောဆင်းခြင်းဖြင့်ကွန်ယက်များစာရင်း။
ဤပြင်ဆင်ချက်ကိုဗားရှင်း ၂ ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည် (BetterWifi နှင့် BetterWifi7) တို့ကို iOS6နှင့် iOS7 / 8 အသီးသီးနှင့်လိုက်ဖက်ပြီးနှစ်မျိုးလုံးမှာဒေါ်လာ ၁.၅၀ ဖြစ်ပြီး BigBoss repo တွင်ရနိုင်သည်။
၈။ ChargingHelper / Plus အား
ChargingHelper ဆိုသည်မှာဘက်ထရီအားပြည့်မှီသည့်အထိကျန်ရှိသောအချိန်ကိုတွက်ချက်သည့် tweak တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်တွင်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအားသွင်းရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်လည်းမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုပြသနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ၊ Plus ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်သောအပို app တစ်ခုထပ်ထည့်သည် ဘက်ထရီဝတ်စုံ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အပြင်ကျန်းမာရေး (သာတွက်ချက်သည်)၊ ပြီးစီးသောအားသွင်းစက်များ (အလွန်အသုံးဝင်သည်)၊ ဘက်ထရီ၏အပူချိန်နှင့်လက်ရှိကုန်ကျစရိတ် (အသုံးမပြုလျှင်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အားဖြည့်လျှင်အပြုသဘော) စသည့်အချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ငါတို့အသုံးပြုနေတဲ့ charger ကို။
ကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်ပုံမှန်တန်ဖိုးများအတွက်အစိမ်းရောင်အရောင်ပြသခြင်း၊ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များအပြင်ဘက်တွင်သွားသူများအတွက်လိမ္မော်ရောင်နှင့်ဘက်ထရီအတွက်အနုတ်လက္ခဏာရှိသူများအတွက်အနီရောင် (၎င်းကိုအစိမ်းရောင်ပြထားသည့်ကုန်ကျစရိတ် မှလွဲ၍) တန်ဖိုးများဖြင့်လမ်းညွှန်ပေးသည်။ အားသွင်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောသောအခါအနီသောအခါ) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီ၏လက်ရှိစွမ်းရည် (ဘယ်လောက်ပြည့်လဲ)၊ အများဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှု (အများဆုံးသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏ) နှင့်စက်ရုံ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (သို့) ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် (ဘက်ထရီများသည်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်၊ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မူ၎င်းစွမ်းရည်မှာကွဲပြားသည်) ကိုလည်းမြင်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်ယူနစ်အတွက်သာလွန်သို့မဟုတ်ယုတ်ညံ့ဖြစ်နိုင်ခြင်း) ။
ပုံမှန်အရာကတော့ Battery Health မှာသူထွက်သွားတာပဲ။ သင်၏စက်သည်အလွန်အသစ်စက်စက်ဖြစ်ပါက ၁၀၀% ထက်ပိုသောကြောင့်၎င်းသည်ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်စက်သည်အချိန်အတော်ကြာရှိနေပြီးသင့်အားအားသွင်းသည့်အလေ့အထများမှန်ကန်ပါက (တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အပြည့်အားသွင်းပါ၊ အားသွင်းခြင်းဖြင့် ၂၄ နာရီထက် ပို၍ မထားပါနှင့်၊ အချိန်မဖြုန်းပါစေနှင့်)၊ ၁၀၀% ထိထိပါ အချိန်နှင့်အမျှဘက်ထရီသည်အချိန်နှင့်အမျှကုန်သွားသည်။ ) ၁၀၀% နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သောပိုမိုကောင်းသောအကျင့်များ၊ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏စက်ဟောင်းနှင့်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါက ၁၀၀% အောက်သာရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်ထက်နိမ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လီသီယမ်ပေါ်လီမာဘက်ထရီများသည်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်အခါတိုင်းအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးစေသောကြောင့်ကျန်းမာရေး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်သင်နှင့်သင်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
ဤပြင်ဆင်ချက်ကိုဗားရှင်း ၂ ခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည် iOS 8 အတွက် ChargingHelper, ChargingHelper Plus၊ iOS 8 အတွက် ChargingHelper နှင့် iOS 8 အတွက် ChargingHelper Plus) iOS 8 အတွက် ChargingHelper နှင့် ChargingHelper iOS 8 အတွက်ကျန်ရှိသောအချိန်ကိုသာပြောပြလိမ့်မယ်။7မှာသင့်ရဲ့ဘက်ထရီအချက်အလက်အားလုံးပါ ၀ င်မှာပါ။ "for iOS8" မပါသောရွေးစရာများသည် iOS 8 လိုအပ်ပြီး "fo iOS 4" နှင့်ပါသူများက iOSXNUMX လိုအပ်သည်။ အားလုံးသည် BigBoss repo တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
၉ ။ iCleaner Pro
အကြိမ်များစွာသင်ဤ tweak အကြောင်းသေချာပေါက်ကြားဖူးတယ်၊ iOS ကိုသန့်ရှင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်အတွက်အရေးကြီးသောအချက်သင်၏ iOS device ကိုသန့်ရှင်းစွာထားရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်တုန့်ပြန်မှုများသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုစားသုံးစေပြီးနေရာတိုင်းတွင်ကျန်နေရန်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာ system နှင့် app cache များကိုရှင်းလင်းရန် (icon caches, ကျွန်ုပ်တို့၏ TimeLine သို့ကူးယူပြီးထိုတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သော Facebook နှင့် Twitter ဓာတ်ပုံများ)၊ အသစ်ပြောင်းသည့်ဖိုင်များသည်နေရာ၊ နေရာအနှံ့၊ cache နှင့် Safari cookies များကိုစားသုံးရန်ဖြစ်သည်။ ယာယီဖိုင်များ ... စသည်တို့
စပိန်ဘာသာနှင့်လုံးလုံးလျားလျား၎င်း၏ PRO ဗားရှင်းတွင် system process များကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းပေးထားသည်။ (၎င်းကိုကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ။ သင်က၎င်းသည် RAM နှင့် CPU ကိုလွတ်မြောက်စေလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏စမ်းသပ်မှုများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ပိုမိုဆိုးရွားသွားသည်။ /)၊ deactivate add-ons များ Cydia Substrate (ယခင် MobileSubstrate က၎င်းကို Cydia tweaks များကိုပိတ်ထားသည် Cy) Cydia Packages (tweak တွင် Cydia Substrate တွင်ပေါင်းထည့်မှုများအများအပြားရှိနိုင်သည် tweak တစ်ခု၊ configuration files များကိုဖျက်မထားပါ၊ သင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါကသင်၏ရွေးချယ်မှုများသည်နဂိုအတိုင်းရှိနေသည်။ ဤဖိုင်များကို iTunes backups များတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤတွင်သင်သည်သူတို့ကိုရိုးရှင်းသောအမူအယာဖြင့် ဖျက်၍ မလိုအပ်သောကျန်ရှိနေသေးသောစနစ်အားလွတ်မြောက်နိုင်သည်။ ) ဘာသာစကားများ (အတွင်းပိုင်းနေရာလွတ်ပေးရန်သင်အသုံးမပြုသည့်စနစ်သုံးဘာသာစကားများကိုသင်ဖျက်နိုင်သည်။ emojis ကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလည်းဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်မတိုက်တွန်းပါ။ ) အင်္ဂလိပ်စာ မျက်နှာပြင်နှင့်ရုပ်ပုံများ (iOS သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာသည့်နောက်ခံပုံများကိုဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်ပြီးရုပ်ပုံများကသင့်အား iPhone 5S သို့မဟုတ်6ရှိလျှင်၊ iPhone3Plus ၏မျက်နှာပြင်များနှင့်ကိုက်ညီသော X6 သို့အရွယ်အစားရှိသောပုံများကိုဖျက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သိုလှောင်မှုတွင်အက်ပ်များပါ ၀ င်သောမှတ်ဉာဏ်ပမာဏများများလွှတ်ရန်အိုင်ပက်နှင့်သက်ဆိုင်သောပုံများ) ။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်၏အန္တရာယ်နှင့်အမြဲတမ်းလုပ်ပါ၊ iCleaner သည်ဘယ်ဘက်မီနူးတွင် "စမ်းသပ်မှုပုံစံ" ဖြစ်ပြီး၊ သင်ဖျက်လိုက်သည့်အရာများကိုလုံးဝဖျက်ရန်မဟုတ်ဘဲရွှေ့ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘယ်ဘက်မီနူးတွင်ရွေးစရာတစ်ခုရှိသည်။ သင်ဤဖိုင်များမရှိခြင်းကိုစစ်ဆေးပြီးနောက် သင်၏စနစ်အားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့ကိုလုံခြုံစွာဖျက်ပစ်နိုင်သည် (ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုပိတ်ထားသည်) ။
iCleaner နှင့် iCleaner Pro တို့သည် iOS4မှ iOS 8 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီး BigBoss repo တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။exile90software.om/cydia/»၎င်းသည် BigBoss တွင်မပေါ်ပါက၎င်းတို့သည် app အတွင်းရှိကြော်ငြာများပါဝင်ပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် developer အားသင်လှူဒါန်းနိုင်သည်။
10. AppSync ကိုပေါင်းစည်းပါ
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သန်လျက်, ဒီ tweak လက်မှတ်ထိုးထားသော Apps များကိုသာတပ်ဆင်ခြင်း၏ iOS ကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွှားရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်, သင်တီထွင်သူလက်မှတ်မလိုအပ်ဘဲသင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ (iOS 8.1 တွင်အလုပ်မလုပ်တော့သော) ရက်စွဲလှည့်ကွက်မပါဘဲအွန်လိုင်းတွင်သင်ရှာနေသောအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ပြုပြင်စရာမလိုဘဲပြုပြင်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ (WhatsApp ကိုကဲ့သို့) ဖိတ်ကြားချက်ကို။
ဒါပေမယ့်အားလုံးကတော့ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ tweak ဟာဘယ် app ကိုမဆို install လုပ်ဖို့တံခါးဖွင့်ပေးပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည့်အရာကိုသတိမပြုမိလျှင်၎င်းသည်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည် malware ကိုပင်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း။ သတိထားပြီးသောသူများ၊ တစ်ချိန်ကထည့်သွင်းပြီးစိတ်ချရသောရင်းမြစ်များမှသာတပ်ဆင်ထားသည် (လူသိများသောဘလော့ဂ်များ၊ အတည်ပြုပြီးသော developer စာမျက်နှာများ၊ MediaFire ပုံစံဒေါင်းလုပ်ဆာဗာများနှင့်အခြားသူများမရှိ ... )
AppSync Unified ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ emulators ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များ၊ AppStore ကိုကောင်းစွာဝှက် ထား၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် ၂ ရက်အတွင်းထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဒီစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ emulators နှင့်အခြား installable app များ၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် iMulators.
AppSync Unified သည်ခိုးကူးထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ခိုးကူးမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်တော် Actualidad Gadget မှာသောအနေအထားကိုမျှဝေကြဘူး ဤအက်ပလီကေးရှင်းများသည်မကြာခဏဖခင်သို့မဟုတ်မိခင်၏လစာနှင့်သူတို့၏ကလေးများအတွက်အစားအစာဖြစ်သည်။
ဒီတော့အပိုင်း ၂၊ မင်းဒါကိုမင်းကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ မနက်ဖြန်မှာအပိုင်း ၃ ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဒီနေရာကိုရယူဖို့ link တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်အကြံပြုချက်သို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်အားမှတ်ချက်များပေးပါဒီဆောင်းပါးကိုဝေငှဖို့မမေ့ပါနှင့်နောက်တဖန်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်!
ဒီ Tweaks များကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်ပြproblemsနာများအတွက် Actualidad Gadget ရောကျွန်ုပ်ပါတာဝန်မရှိပါသူတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုအမြဲတမ်းသတိထားပြီးကောင်းစွာသိရှိရန်ကြိုးစားပါ။
[poll id = » 8 poll]
အပိုင်း 1 သို့လင့်ခ် / အပိုင်း3သို့လင့်ခ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » iOS 15 အတွက် Cydia Tweaks ထိပ်ဆုံး ၁၅ ခု (အပိုင်း ၃)
အက်ဝါဒိုက M ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောအချက်အလက်, ငါရှိသည်သို့မဟုတ်မတှေ့ရှိကြောင်း tweaks အသုံးပြုသော, ငါအပိုင်း3မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Eduardo M ကိုပြန်ပြောပါ
Eduardo ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂အသုံး ၀ င်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအမြဲပေးရတာဝမ်းသာပါတယ်။
မနေ့ကလို အလွန်ကောင်းစွာအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်။ မနက်ဖြန်ကိုစောင့်နေတယ် အရမ်းရယ်ရတယ်
Lantern တွင် "အင်တာနက်" အသစ်တစ်ခုမွေးဖွားလာသည်
iOS 15 အတွက် Cydia Tweaks ၁၅ ခု